Nagarik News - को 'गुड किसर'?
12 May 2016 | 12:19pm
एउटै फिल्मका दुई कलाकारबीच 'कसको अभिनय राम्रो?' भन्ने विषयमा चर्चा हुनुपर्ने हो। तर, निर्देशक आकाश अधिकारीको फिल्म 'के म तिम्रो होइन र'को हकमा अर्कै भइरहेको छ। यो फिल्मका दुवै प्रमुख कलाकार आर्यन अधिकारी र मरिष्का पोखरेल नयाँ हुन्।
'सिक्स प्याक' शरीरका कारण आर्यन चर्चामा छन् भने आकर्षक फिगर र अनुहार कारण मरिष्का पनि 'नोटिस्ड' भइरहेकी छिन्। एक्सन र प्रेम दुवैको मिश्रण रहेको यो फिल्ममा आर्यन–मरिष्काबीच पाँचवटा किस सिन रहेको बुझिएको छ। जसमध्ये तीनवटा लिप किस रहेको उनीह आफैँले खुलाएका छन्।
फिल्मवृत्तमा यतिबेला उनीहको किस सिनलाई लिएर चर्चा चलिरहेको छ। दुईमध्ये को 'गुड किसर'? भन्ने प्रश्नमा आर्यन र मरिष्का दुवैले 'हामी दुवै' भन्ने जवाफ दिएका छन्। आर्यन र मरिष्का दुवैले एकअर्कालाई 'राम्रो किसर'को संज्ञा दिँदै प्रशंसा गरेका छन्।
आर्यनले त धेरै मान्छेको अगाडि किस गर्नुपर्ने भएकाले एकान्तमा गरेजस्तो अनुभव नहुनेसम्म बताए। किसका विषयमा दुवै कलाकार यसरी खुल्नु कतै फिल्म चलाउने फण्डा त होइन? फिल्म वैशाख ३१ गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदै छ।
« आर्यनलाई दुब्लाउन निर्देशन मिडियाले मलाई 'फ्रि रेट हर्ट प्रपटी' बनाइदियो : साहाना [भिडियो] »